चाडपर्वको अर्थशास्त्रीय आयाम
हामी हाम्रा हरेक चाडपर्वलाई धुमधामले मनाउने कोसिसमा हुन्छौँ । तर त्यही चाडपर्वमा हामी हाम्रै उत्पादनलाई प्रयोग गर्दैनौँ । त्यसैले त्यस्ता वस्तु कम उत्पादन हुन थालेका छन् । हामीलाई पुग्ने गरी उत्पादन गर्न पनि हामी असक्षम हुँदैछौँ र अधिकांश वस्तु छिमेकीबाट आयात हुन थालेको छ । यसले चाडपर्व हाम्रो तर व्यापार अरूकै हुन थालेको छ । हामी त खाली खर्च मात्रै गर्ने हुँदैछौँ, आम्दानी अरूले नै गर्दैछन् । यसले गर्दा हाम्रो अर्थतन्त्र परनिर्भर र कमजोर बन्दैछ । बल्लतल्ल रेमिट्यान्सले धानेको अर्थतन्त्रमा बढ्दो आयातले गर्दा चुनौती थपिँदो छ । हाम्रो निर्यात नगण्य छ । हामीले वर्षभरि आयात गर्ने इन्धनको मूल्यजतिको पनि हामीले निर्यात गर्न सकेका छैनौं । यस्तो अवस्थामा हामीले हाम्रा हरेक चाडपर्वमा आवश्यक सबै वस्तु विदेशबाटै आयात गर्दा चाडपर्वकै अवसरमा ठूलो परिमाणमा नेपाली पुँजी बाहिरिरहेको छ । हामीले हाम्रो पुँजी स्वदेशमै परिचालन गर्न सकेको भए र यसबाट थप पुँजी निर्माण गर्न सकेको भए हाम्रो अर्थतन्त्र सुदृढ हुने थियो । तर वस्तु आयातको नाउँमा हामीले मुश्किलले आर्जन गरेको पुँजी ठूलो परिमाणमा बाहिरिँदा अर्थतन्त्र नै कमजोर बन्न पुगेको छ ।
विश्वभर उपभोगवादी संस्कृति फैलँदो छ र वस्तुहरूको माग बढ्दो छ । मागअनुरूपको आपूर्ति व्यवस्थापनका लागि उत्पादन वृद्धिमा दबाब बढिरहेको छ र आक्रामक विश्वबजारले कसैलाई अछुतो छोडेको छैन । आन्तरिक उत्पादन र रोजगारीमा वृद्धि हुन नसके पनि विशेषगरी वैदेशिक रोजगारीका कारण रेमिट्यान्समा भएको वृद्धिले औसत नेपालीको आयमा पनि केही वृद्धि भएको छ । यसले गर्दा नेपालमा पनि उपभोगवादी संस्कृति बढ्दो छ । तर रेमिट्यान्समै निर्भर रहने र उत्पादन गरेरभन्दा आयात गरेर उपभोग गर्ने संस्कृतिले बढावा पाएको छ । चाडपर्वको बेला उपभोग्य वस्तुको आयातमा थप वृद्धि हुने गरेको छ ।
नेपालीहरूको वार्षिक उपभोग खर्च करिब रु. ३० खर्ब बराबरको छ । यसमध्ये दशैंतिहारमा मात्रै रु. आठ खर्ब बराबरको उपभोग खर्च हुने गरेको छ । यसैगरी वर्षभरी हुने कुल व्यापारमध्ये ३० प्रतिशत दशैं र तिहारको बेला हुने गरेको छ । यो वर्षको तिहारका लागि झन्डै रु. ६० करोडको झिलिमिली बत्तीसहितका विद्युतीय सामग्री आयात भयो । यसमध्ये चीनबाट झन्डै ९० प्रतिशत र भारतबाट १० प्रतिशत आयात भयो । यसैगरी भारतबाट रु. ६० लाख बराबरको फूलको माला आयात भयो । तिहारका लागि मात्रै हरेक वर्ष करिब रु. १० करोडको फूल आयात हुने गरेको फ्लोरिकल्चर एसोसिएसनले जनाएको छ । कृषिप्रधान मुलुकका लागि यो निकै लज्जास्पद छ । आफ्नै खेतबारीमा सजिलै फुलाउन सकिने फूल पनि यति ठूलो परिमाणमा आयात गर्नुपर्ने स्थिति हामी कति परनिर्भर हुँदै गइरहेका छौं भन्ने कुराको प्रमाण हो ।
तिहारलाई लक्षित गरेर कात्तिक महिनाको १८ दिनमा विभिन्न मुलुकबाट रु. ६३ करोडको सामग्री आयात भएको भन्सार विभागले जनाएको छ । विभागको तथ्यांकअनुसार तिहारको अवसरमा विशेषगरी भाइटीकालाई चाहिने बदाम, नरिवल, ओखर, किसमिस, काजुलगायतका मसला र स्याउ, सुन्तला, केरालगायतका फलफूल आयात भएको हो । चाडपर्वकै बेला अत्यधिक मदिरा सेवन हुने र यस्तो मदिरा पनि आयातमै निर्भर हुने भएकाले मदिराकै लागि पनि ठूलो पुँजी बाहिरिने गरेको देखिन्छ । पछिल्लो समय नेपाली समाजमा चाडपर्वलाई जाँडपर्वको रूपमा मनाउने प्रवृत्ति बढेकाले यस्ता पदार्थको आयातमा ठूलै रकम विदेशिने गरेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
तिहारमा दीपावलीका लागि दियो बाल्न माटाका पाला प्रयोग गरिन्थ्यो । तर अहिले भने विद्युतीय पालाहरू झल्लर बत्तीहरू प्रयोग गरिन्छ । विद्युतीय पालाले गर्दा कुम्हालेहरूको रोजीरोटी नै खोसियो । केही हदसम्म दीपावालीका लागि मैनबत्तीको प्रयोग हुन्थ्यो । घरेलु उद्योगको मैनबत्ती उत्पादनले केही समय प्रोत्साहन पाएको थियो । तर अहिले विद्युतीय बत्तीहरूले गर्दा मैनबत्ती उद्योग पनि विस्थापितजस्तै भएका छन् ।
हाम्रो संस्कृतिले हाम्रै बजारको प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने हो र हामीलाई नै रोजगारी दिनुपर्ने हो । हाम्रा पुर्खाले मनाउने चाडपर्वले हाम्रै बजारको प्रवद्र्धन हुन्थ्यो, हाम्रै उत्पादनले बजार पाउँथ्यो र हामीले नै रोजगारी पाउँथ्यौं र आम्दानी पनि हुन्थ्यो । तर अहिले हाम्रो संस्कृति आयातमुखी भएको छ । सबै कुरा आयातमा निर्भर हुन थालेको छ । जसले गर्दा हाम्रो बजारमा विदेशी उत्पादनले कब्जा जमाएको छ र हाम्रो रोजगारी पनि खोसिएको छ । रोजगारी खोसिनु भनेको आम्दानी खोसिनु हो । यसको पछिल्लो उदाहरण हो कुमालेको पेशा र मैनबत्ती उद्योग ।
हाम्रो संस्कृतिभित्र हाम्रो जीवनशैलीको विशेषता पनि लुकेको हुन्छ । त्यसैले हामी हाम्रो संस्कृति बचाउने प्रयास गर्छौं । तर संस्कृति बचाउन मनाउने चाडपर्वले खर्च मात्रै बढाउन थालेकाले अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्न थालेको छ । विशेष गरी हामीले मनाउने चाडपर्व विदेशी संस्कृतितिर ढल्किन थालेको र चाडपर्वमा प्रयोग गर्ने प्रायः सबै वस्तु आयात हुने भएकाले हाम्रो उत्पादनले बजार पाएन, हाम्रो बजारमा विदेशी उत्पादन हाबी हुन थाल्यो । यसले हाम्रा आफ्ना उत्पादन विस्तारै विस्थापित हुँदै जान थाले । हाम्रो रोजगारी पनि खोसिँदै जान थाल्यो र हाम्रो अर्थतन्त्रलाई विदेशी अर्थतन्त्रले ठाडै हस्तक्षेप गर्न थाल्यो । परिणामतः हाम्रो अर्थतन्त्र परनिर्भर र दिनप्रतिदिन कमजोर बन्न थाल्यो ।
हाम्रो अर्थतन्त्र कुन हैसियतमा छ भन्ने कुरा विगतमा भारतले गरेको करिब पाँच महिनाको नाकाबन्दीमा हामीले देखिसक्यौं, भोगिसक्यौं । तर हामीमा अझै पनि स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ र स्वदेशी उत्पादन वृद्धिमा जोड दिनुपर्छ भन्ने चेत आएको छैन । हामी आफ्नै उत्पादनलाई खिसी गरेर विदेशी उत्पादन प्रयोग गर्न सक्नुमा गर्व गर्छौं । हाम्रो यही बानीले हामीलाई झन्झन् परनिर्भर बनाउँदैछ । हाम्रो यही परनिर्भरताको स्थितिले गर्दा देशको राजनीति, समाज र अर्थतन्त्रमा पनि विदेशी प्रभाव र दबाब बढ्दै गइरहेको छ । यस्तो चौतर्फी प्रभाव र दबाबले हाम्रो स्वाभिमानलाई बलियो चुनौती दिइरहेको छ । यो चुनौतीलाई बेलैमा पार लाउन सकेनौं भने हाम्रो स्वाभिमान नै संकटमा पर्ने
निश्चित छ ।
हाम्रो चाडपर्वमा आत्मीयता झल्कनु पर्नेमा भड्किलोपनले प्रश्रय पाएको छ र एकआपसमा इष्र्या र प्रतिस्पर्धाले स्थान लिएको छ । आत्मीयताको ठाउँमा प्रतिस्पर्धा बढेपछि कसरी सामाजिक सद्भाव कायम रहन्छ ? हैसियतको प्रतिस्पर्धाले गर्दा एकातिर आत्मीयता र सामाजिक सद्भाव खल्बलिएको छ भने स्वदेशी वस्तुको प्रयोगभन्दा विदेशी महँगा वस्तुको प्रयोग बढ्दो छ । फलतः खर्चमा हुने वृद्धिले चाडपर्व महँगो साबित हुँदैछन् । सबैका लागि आउने चाडपर्व पनि अब हुनेखानेका लागि आएजस्तो हुँदैछ । हुँदाखानेले ऋण लिएर चाडपर्व मनाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएपछि संस्कृतिप्रति नै वितृष्णा बढ्ने खतरा पनि बढेको छ । विदेशी धर्म र संस्कृतिले आक्रामक हस्तक्षेप गरिरहेको अवस्थामा आफ्नै संस्कृतिप्रति वितृष्णा बढ्दै गयो भने हाम्रो आफ्नो पहिचानमाथि प्रश्नचिह्न खडा हुनेछ । यसतर्फ बेलैमा सचेत हुनु आवश्यक छ ।